ရေတွက်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China Gachn servo ကလေးအနှီးစက် / အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအနှီး stacking | GACHN
အနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက် - ၁ ချိန်
ပို့ဆောင်ချိန်: 90-120 အလုပ်နေ့
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: L / C, T / T က
Supply နိုင်ခြင်း: ၁၀ လသတ်မှတ်သည်
L3.6mÃ — W3.3mÃ-H2.2m
Stacking ပမာဏ -
အရေအတွက်ကိုရေတွက်ခြင်းနှင့်စုပုံခြင်း 15-450 အပိုင်းပိုင်း
တစ်ခုတည်းအပိုင်းအစ၏အရွယ်အစား အလျား - ၁၈၀mm မှ ၂၆၀ မီလီမီတာ - အထူ 8mm မှ ၁၅mm
အဆိုပါစက် layout ကိုအရွယ်အစား L3.6m × W3.3m × H2.2m
အဆိုပါ Device ကိုပါဝါထောက်ပံ့ရေး 3Ph380Vac50HZ, သုံးအဆင့်လေးဝါယာကြိုးစနစ်
ရေတွက်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်း 600pcs / min
လေအရင်းအမြစ် - လေဖိအား 0.5MPa
လေထုသုံးစွဲမှု ၃၀၀L / မိနစ်
ဆူညံသံ ဆူညံသံï¼œ85db (က)
Mitsubishi နှင့် Yaskawa ရွေ့လျားမှုကိုထိန်းချုပ်သည့် PLC နှင့်အထွေထွေ linear servo မောင်းနှင်မှုစနစ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အလွန်တိကျပြီးတည်ငြိမ်သောရေတွက်ခြင်းကိုပုံသေသေချာစေသည်။
ထုပ်ပိုးတင်ပို့မှု (၂) ခုနှင့်တခုခုအားဆိပ်ကမ်း (၁) ခုထားပါ။ ထုပ်ပိုးသည့်စက်ကျသွားသောအခါထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းသည်ရိက္ခာဆိပ်ကမ်းတွင်ထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။
၁ ။ဖောက်သည်များ၏စက်ရုံ၊ လိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်သည်
2. ထုတ်ကုန်၏နောက်ဆက်တွဲ ၀ န်ဆောင်မှု - ထုတ်ကုန်စက်ရုံမှထွက်ပြီးကတည်းကသင်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိမှာပါ။
4. မှားယွင်းသောကုသမှု - ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသည်၎င်းတို့အားမည်သည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုမဆိုချက်ချင်းအရေးယူမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားကူညီရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြင်ဆင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်သင်၏ပြproblemsနာများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပါ။
၃။ စက်ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်လေ့ကျင့်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်စက်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်သူ၏စက်ရုံသို့စက်ပစ္စည်းပို့နိုင်သည်။
အကယ်၍ စက်သည်အာမခံကာလအတွင်းကျိုးပဲ့ပါက ၂- အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများထောက်ပံ့မည်။
၃။ အာမခံသက်တမ်းကုန်ပြီးနောက်၊ ပြန်လည်နေရာချထားရန်အပိုပစ္စည်းများကိုအားသွင်းမှုပေါ်မူတည်သည်။
စက်တွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ servo motor နှင့် PLC touch panel တို့ဖြင့်ထုပ်ပိုးမှုအပူချိန်၊ ထုပ်ပိုးမှုမြန်နှုန်းနှင့်တစ်သျှူးအရှည်များကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဒီစက်သည်အလိုအလျှောက်အမှားနှိုးစက်စနစ်နှင့်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်အချက်ပြများ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူအလင်းလျှပ်စစ်ပေါင်းစည်းမှုဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။
၀ ယ်သူအဆိုအရ touch screen panel ၏ဘာသာစကားကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
1 နှစ်, ဒါပေမယ့်ရာသက်ပန်ထိန်းသိမ်းမှု
3. မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သော, တည်ငြိမ်ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အထုပ်နှင့်စိုစွတ်သော Wipe များ၏အကျယ်နှင့်အရှည်ကိုသင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
၁။ ရက်သတ္တပတ် ၁ ပတ်မှ ၁ ပတ်အထိစက်မလည်ပတ်မီမည်သို့လည်ပတ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်စက်ရုံမှကျွမ်းကျင်သူကိုကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
၂။ ထို့အပြင်သင်၏စက်ရုံရှိစက်ပြီးနောက်စက်များကိုတပ်ရန်၊ စမ်းသပ်ရန်နှင့်သင်၏အလုပ်သမားများကိုလေ့ကျင့်ရန်အတွက်သင်၏အလုပ်ရုံသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များကိုစေလွှတ်မည်။
၃။ အာမခံသက်တမ်းတစ်နှစ်၊ အခမဲ့အကြံပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှု၊
? ၂၄ နာရီအီးမေးလ်ဖြင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု။
Operation system အတွက်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောအင်္ဂလိပ်။
1) ။ ဒီပစ္စည်းသည်သပ်ရပ်သောဆောက်လုပ်ရေးရှိပြီးတည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်ကျွမ်းကျင်ရန်လွယ်ကူသည်။
3) .MMO သည်အလွန်မြင့်မားသော OMRON photoelectric tracing system တပ်ဆင်ထားသည်။
4) ။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်သောနေရာအလွန်တိကျသည်နှင့်ဖျံများ၏အပူချိန်ကိုသီးခြားစီထိန်းချုပ်ထားသည်နှင့်ဖြစ်ပါတယ်
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးအတွက် apt တံဆိပ်သည်တရားမျှတပြီးခိုင်မာသည်။
၆။ ။ အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအလိုအလျောက်ပြုပြင်ခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားသည် - ပစ္စည်းခေါက်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊
ဖြတ်၏ အစာကျွေးခြင်း၊ ဆေးအရည် (disinfector) မှုတ်လိမ်းပြီးထုပ်ပိုးသည်။
၇) ဆေးရည်အရည်ပါ ၀ င်မှုဖော်ပြချက်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်လည်ပတ်နေသောစနစ်ရှိသည်။
8) ။ ဆေးရည်အရည်စီးဆင်းမှုကိုလက်စွဲဖြင့်လွတ်လပ်စွာချိန်ညှိနိုင်သည်။
တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ရန်အထိကုန်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်တိကျသောစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့ခန့်အပ်သည်။
စိုစွတ်သောသုတ်စက်အတွက်သင်၏မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားလျင်မြန်စွာနှင့်ပညာရှင်ဆန်သောပြန်ကြားချက်။
2.Epert အရောင်းဝန်ထမ်းသည်စက်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်သင့်တော်သောလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်
၄.၂၄ နာရီအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အိမ်သာတစ်ရှူးစက္ကူပြုလုပ်သည့်စက်နှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်းများသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများရှိပါကတစ်ပတ်တစ်ရက်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
1. အင်ဂျင်နီယာများသည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အလုပ်လုပ်ရန်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်
ရှေ့သို့ သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါနှင့် panty liner pads ရေတွက်ခြင်းနှင့် stacking စက်
နောက်တစ်ခု: မစ်ဆူဘီရှီ Q170MCPU-S1 ကလေးအနှီးစက် ၆၀၀ pcs / min အမြန်နှုန်းရေတွက်သည်
အပြည့်အဝ Servo ကလေးအနှီးစက် / stacking အရေအတွက် ...
Full Servo ကလေးအနှီးစက် / ကလေးအနှီး St ...
အပြည့်အဝကလေးအနှီးစက် / ရေတွက်မီတာ ...
GM-085N ကလေးအနှီးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းL3.6mÃ —W3.3 ...
အရှိန်မြှင့်မြန်နှုန်းကလေးနှင့်အရွယ်ရောက်နှီး stacking count ...